आजको विनिमयदर, हेर्नुहोस् कुन देशको मुद्राको मूल्य कति ? – OMKARTIMES
आजको विनिमयदर, हेर्नुहोस् कुन देशको मुद्राको मूल्य कति ?
ओमकार २०७६ भाद्र २२, ०७:२५ बजे
काठमाडौँ । आज पनि अमेरिकी डलर लगायत अन्य देशको विनिमयदर स्थिर छ। अमेरिकी डलर १ को खरिदर मूल्य १ सय १४ रुपैयाँ ४६पैसा रहेको छ भने बिक्रिदर मूल्य १ सय १५ रुपैयाँ ६ पैसा छ। त्यस्तै यूरोपियन यूरो १ को खरिदर मूल्य १ सय २६ रुपैयाँ १८ पैसा छ भने बिक्रिदर मूल्य १ सय २६ रुपैयाँ ८४ पैसा छ।
त्यस्तै आज अष्ट्रेलियन डलर १ को खरिदर मूल्य ७८ रुपैयाँ २४ पैसा छ भने बिक्रिदर मूल्य ७८ रुपैयाँ ६५ पैसा रहेको छ। आज सिंगापुर डलर १ को खरिदर मूल्य ८२ रुपैयाँ ८४ पैसा छ भने बिक्रिदर मूल्य ८३ रुपैयाँ २७ पैसा रहेको छ।
आज साउदी अरेवियन रियाल १ को खरिदर मूल्य ३० रुपैयाँ ५२ पैसा छ भने बिक्रिदर मूल्य ३० रुपैयाँ ६८ पैसा रहेको छ। त्यस्तै कतारी रियालको खरिदर मूल्य ३१ रुपैयाँ ४४ पैसा छ भने बिक्रदर मूल्य ३१ रुपैयाँ ६० पैसा रहेको छ।